Nhau - Chiziviso chipfupi chemigodhi kutenderera chinongedzo chesimbi cheni kugadzirwa uye tekinoroji
Sumo pfupi yekuchera kutenderera chinongedzo chesimbi cheni kugadzira uye tekinoroji
Round link simbi cheni yekugadzira maitiro:
Bhawa kucheka → kutonhora kukotama → kubatanidza → kutenderera → yekutanga calibration → kupisa kurapwa → yechipiri calibration (humbowo) → kuongorora. Welding uye kupisa kurapwa ndiwo akakosha maitirwo mukugadzirwa kwemigodhi kutenderera link simbi cheni, iyo inokanganisa zvakananga chigadzirwa mhando. Scientific welding parameter inogona kugadzirisa goho uye kudzikisa mutengo wekugadzira; Yakakodzera kupisa kurapwa maitiro anogona kupa kuzere kutamba kune zvinhu zvivakwa uye kugadzirisa chigadzirwa chigadzirwa.
Kuitira kuti uve nechokwadi chekutemesa mhando yemigodhi kutenderera chinongedzo chesimbi cheni, manyore arc Welding uye resistance butt butt Welding zvabviswa. Flash buti Welding inoshandiswa zvakanyanya nekuda kweiyo yakakwira degree of otomatiki, yakaderera basa kusimba, yakagadzikana chigadzirwa mhando uye zvimwe zvakatanhamara zvakanakira.
Parizvino, iyo yepakati frequency induction kupisa inoramba ichidzimisa uye tempering nzira inowanzo shandiswa mukupisa kwekupisa kwemigodhi kutenderera kubatanidza simbi cheni. Iko kukosha kwepakati frequency induction kudziyisa ndeyekuti mamorekuru chimiro chechinhu chinomutswa pasi pemagetsi emagetsi, uye morekuru rinowana simba ndokurovera kuti riunze kupisa. Kana iyo yepakati frequency induction kupisa kurapwa kuitiswa, iyo inductor inosunganidzwa nepakati frequency frequency ichichinjisa yazvino yeimwe frequency, uye iyo workpiece inofamba neiyunifomu kumhanya mune iyo sensor, kuti iyo induction yazvino neiyo yakafanana frequency uye inopesana negwara ichave inogadzirwa mune yekushandira, inozoshandura simba remagetsi kuita simba rekupisa, uye iyo yekushandira inodziyirwa kune tembiricha inodiwa nekudzima uye kupisa mukati menguva pfupi.
Iyo yepakati frequency induction kupisa ine zvakanakira yekukasira kudziya kumhanya, kushomeka kweiyo oxidation, yakanaka kudzima chimiro uye austenite gorosi saizi mushure mekudzima, iyo inovandudza simba uye kuomarara kwecheni yekubatanidza. Panguva imwecheteyo, zvakare ine zvakanakira rucheno, kugadziridzwa kuri nyore uye kugadzirwa kwepamusoro kugadzira. Muchikamu chekupisa, iyo yakanyanya tempering tembiricha muketani yekubatanidza nzvimbo yekutenderera inogona kubvisa kudzima kwemukati kunetsekana munguva pfupi, iyo ine simba rakakosha pakuvandudza mapurasitiki uye kuomarara kweketani yekubatanidza nzvimbo yekutenderera uye kunonoka kutanga uye kusimudzira wekutsemuka. Iyo tembiricha yekupisa pamusoro pefudzi yakaderera, uye kuomarara kwakakwira mushure mekutsamwa, zvinoenderana nekupfeka kwecheni chinongedzo mukushanda nekurwisa hinji pakati pechisungo cheketani uye neshinda yepaseti.